टिप्पणी बुधबार, वैशाख ४, २०७६
पति किरणराज जोशीलाई स्वयम्बरको टीका लगाइदिंदै लेखिका ।
मेरी बुढीसासू बिहे हुँदा ९ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो, सासू ११ वर्षकी । त्यतिबेला केटी माग्न आएपछि कुल–खानदान हेरेर ‘लौ त’ भन्ने चलन थियो । तराईमा जन्मेकी मेरी आमाले आफ्नी आमाको काख १० वर्षको उमेरमै छोड्नु प‍र्‍यो, काठमाडौंको घरमा भित्रिनलाई ।
मामा घरकी हजुरआमाले उतिबेलै आमालाई ‘घर खाने’ ज्ञान हस्तान्तरण गरिसक्नुभएको थियो— मुख्यतः कसरी सासू रिझाउने ! ४५ वर्षअघि मेरो बिहेको कुरो चल्दा १६ वर्षकी म, स्कूल पढ्दै थिएँ । मलाई चाहिं ‘घर खाने र रिझाउने’ सीप सिकाइएन । कसैले सोध्दा, आमाले ‘सिकिहाल्छे नि’ भनेको सम्झन्छु ।
मलाई बिहे गर्न पटक्कै मन नभए पनि झण्डै पाँच दशक अघिको माहोलमा, नाइँ भन्ने कुरो आउँदैनथ्यो । बाबुआमा, अझ विशेषगरी बाबुले भनेपछि उ बेला अकाट्य नै हुन्थ्यो, इन्कारीको गुञ्जाइस नै थिएन । समय र समाज बदलिंदै जाँदा, दशकौंपछि मेरा तीनै जना छोराछोरीले ३० वर्षको हाराहारीमा आफ्नो रोजाइको बिहे गरे ।
सबैले आफ्नो जीवनसाथी आफ्नो विरादरी (जात) भन्दा बाहिर रोजे, हामी सबैलाई स्वीकार्य भयो । कान्छी छोरीले आफ्नो बिहेको विधिमा ‘कन्यादान’ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिन्— ‘म वस्तु वा गाई हैन दान गरिनलाई’ भन्दै । शतक पार गरेकी जिजुमुमादेखि पूरै परिवारको समर्थन जित्‍न सफल भइन्, र त्यही अनुसार उनको बिहे सम्पन्न भयो । आफ्नै परिवारका यी घटना नियाल्दा पनि नारी स्वतन्त्रताका हकमा समाजले मारेको फड्को बारे केही अड्कल गर्न सक्छु ।
उमेरले गर्दा कत्ति फरक पर्छ– बच्चामै बिहे हुनु र आत्मनिर्भर भई आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने उमेरमा अर्को व्यक्तिसित जिन्दगी बिताउने फैसला गर्नुमा । आफ्नाबारे केही सोच्न सक्ने नहुँदै घुम्टोभित्र पसाइँदा केटीहरूको व्यक्तिगत विकास नै रोकिन्छ । मेरो बिहे पढ्न प्रोत्साहन गर्ने घरमा भए पनि, आफ्नो आकांक्षा बुझ्न र के पढ्ने छनोट गर्न मलाई निकै समय लागेको थियो ।
१८ वर्षकी हुँदा म आमा बनिसकेकी थिएँ । युनिसेफमा काम शुरू गरेपछि मात्र बोध भयो– जीउ परिपक्व नहुँदै गर्भ रहँदा र सानैमा सुत्केरी हुँदा के के जोखिम थिए, भन्ने । अझ कामको सिलसिलामा गाउँ घुम्दा धेरै दिदीबहिनीले ३० वर्ष पुग्दासम्म ६–७ वटा सन्तानको आमा भइसकेको कुरा सुनाउँथे ।
लैंगिक विभेदका धेरै खाडल पुरिंदै गए पनि, नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले अहिलेसम्मका सबै उपलब्धिलाई गिज्याइरहेको छ।
शहरतिर हजुरआमाको पालाको जस्तो सुनिने यो कुरा कतिपय गाउँमा हिजो–आजकै हो । बच्चा पाउने मेशीन जस्तो वर्षेनि पेट बोक्ने, त्यसमाथि लालाबालाको देखभाल र घरको कामधन्दा भ्याई–नभ्याई हुँदा आफ्नो बारेमा सोच्ने कहिले ? मलाई लाग्छ केटा र केटी बीचमा समाजले खनेको खाडल पुर्नका लागि आधारभूत काम हो– बालविवाहको अन्त्य ।
कत्ति दिदीबहिनीले छोराको आशामा लस्करै छोरी जन्माएको बताउँथे । मेरै पनि पहिलो सन्तान छोरा भएपछि परिवारजनलाई एक किसिमको राहत महसूस भएको थियो । अहिले, विशेषगरी शहरतिर छोरा कुर्ने चाहना विलाउँदैछ । एउटै सन्तान छोरी पाएर ढुक्कले बस्नेहरू बढेका छन् ।
मेरै दुवै छोरीहरू छोरी पाएर दंग छन् । मैले जेठी छोरी जन्माउँदा ‘छोरी पाउँदा पनि कस्तो दंग परेकी’ भन्ने बुढीसासू अहिले १०४ वर्षको उमेरमा सबैलाई ‘बुझयौ, पाउनुपर्ने छोरी नै रैछ !’ भन्न थाल्नुभएको छ ! समाजले छलाङ अवश्य मार्दैछ ।
संसारैभरि, र हाम्रो भेकतिर पनि, हुर्काइका बेलादेखि नै केटा र केटीका लागि बेग्लाबेग्लै अलिखित नियमहरू बनाइएको छ । परम्परा वा चलनका नाममा मनभित्र गडेका त्यस्ता नियम हटाउन निकै कसरत गर्नुपर्छ ।
कतिपय यस्ता कुरामा छोराछोरी नै मेरा गुरु बनेका छन् । पढेलेखेकी, देश–विदेश डुलेकी, मानवअधिकारबारे जानकार ठान्ने मलाई त्यसबेला आफैंलाई लोप्पा खुवाउन मन लाग्यो, जब जग्गेमा जेठी छोरीलाई दुलाहाको खुट्टा ढोग्न भनिंदा ज्वाईंले रिसाउँदै त्यसो गर्न दिएनन् । मैले त्यो विधिबारे धेरै सोच्दै नसोची, ‘चलन’ मानेर निरन्तरता दिएकी रहिछु ।
अहिले नातिनातिनाको हुर्काइ देखिरहँदा लाग्छ, मैले छोराछोरी हुर्काउँदा केही कुरामा लैंगिक ‘यथास्थितिवाद’ लाई पनि निरन्तरता दिएकी रहेछु । यद्यपि, पुस्तान्तर हुँदै गर्दा यस्ता विषयमा प्रगति हुँदै गएको छ । मेरी सासू सानैमा आफ्ना भाइहरूसित भकुण्डो खेल्दा, आफन्तले उहाँकी आमालाई ‘छोरीलाई छाडा बनाउन लागेकी’ भनेर हपारेका थिए रे !
मैले जेठी छोरी जन्माउँदा ‘छोरी पाउँदा पनि कस्तो दंग परेकी’ भन्ने बुढीसासू अहिले १०४ वर्षको उमेरमा सबैलाई ‘बुझ्यौ, पाउनुपर्ने छोरी नै रैछ !’ भन्न थाल्नुभएको छ ! समाजले छलाङ अवश्य मार्दैछ।
म चाहिं दाजुहरूसँग उहाँहरू जस्तै खेल्दै–पढ्दै हुर्किएँ– लुगा लगाइ, हिंडाइमा‍ केही छेकबार भएन । अहिले भूमण्डलीकरणको समयमा मेरा छोरीहरूले आफ्ना छोरी हुर्काउने क्रममा लैंगिक हिसाबले सोचविचार गरेर व्यवहार गर्छन् । म उनीहरूसित पनि सिक्दैछु, र आफूले नजानेर त्यसबेला गरेका गल्ती महसूस गर्दैछु ।
पहिरन र बोलीले पनि बालबालिकाको संसार हेर्ने दृष्टिमा प्रभाव पार्छ भन्नेमा चनाखा छन् उनीहरू । त्यसैले सक्दो ‘जेन्डर न्युट्रल’ तरिकाले व्यवहार गर्छन् हुर्कंदो उमेरका छोरीहरूसँग । कठिन छ, तर कोशिश गरेका छन् । छोरी भनेपछि, पुतली र ‘घर–घर’ खेल्नुपर्ने, गुलाफी लुगाफाटा लगाउनुपर्ने मान्यतालाई लत्याउँदै उनीहरूले हवाईजहाज, डायनोसरका बुट्टा भएका, कालो, हरियो, नीलो रङका केटाले लगाउने भनिएका जस्ता लुगा खोजीरोजी लगाइदिन्छन् ।
बार्बी पुतली त बहिष्कार नै गरेका छन् । दिमाग चलाउनुपर्ने खेललाई जोड दिएका छन् । नातिनीहरूलाई घरमा ‘कस्ती राम्री !’ या ‘नक्कली’ भनिंदैन बरु, उनीहरूको व्यवहार, खेल वा अरू कार्यमा जोड दिंदै ‘गज्जब राम्रो ग‍र्‍यौ’, ‘स्याबास् !’ भनेर तारिफ गरिन्छ ।
आफ्ना छोरीहरू ठूलो भएर, आत्मविश्‍वासका साथ समाजले कोरेको ‘केटीको दायरा’ लाई फड्केर अघि बढ्न सक्नेछन् भन्ने विश्वास उनीहरूमा देखिन्छ । यी लैंगिक समानतातिर लम्कने स–साना, तर महत्वपूर्ण पाइलाहरू हुन् ।
हुन त घरमा उनीहरूले गरेको मिहिनेतलाई चुनौती दिइरहेको छ, बजार र मिडियाले– उही परम्परागत केटा र केटीको चित्रण गरेर । तर, समाज उदारीकरणतर्फ लम्किइरहेको हुँदा मेरा नातिनातिना वयस्क हुँदासम्म शायद केटा र केटी बारेको परम्परागत सोच पनि परिवर्तन भइसक्नेछ ।
वरिपरि नियाल्दा अहिले नै नेपाली समाजमा छोरीहरूले विभेदको चौघेरो नाघ्न निकै प्रयत्‍न गरेका छन् । केटाहरूले मात्र गर्न सक्ने भनिएका फाँटमा केटीहरू चम्किन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण पुरुषविहीन बन्दै गएका गाउँतिर बाध्यताले नै सही, महिलाको पोल्टामा उनीहरूका पतिले गर्ने काम आएको छ ।
त्यसले उनीहरूको निर्णय गर्ने क्षमता बढाएको छ, बजारतिर जाने आँट दिलाएको छ, बालबच्चाका बारेमा फैसला गर्ने जिम्मेवारी विकास भएको छ । बिस्तारै सही, नारीहरू मुखर हुँदैछन्, आत्मविश्‍वास बढाउँदैछन्, परनिर्भर हुन नरुचाउने भएका छन् । परिवर्तनको यो क्रम सही बाटोमै चलिरहे, मेरा नातिनीहरूले आफ्ना आमाभन्दा अझ्ै सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने वातावरण बन्दैछ ।
तर नारी र पुरुषलाई समान आदर, समान अधिकार दिने समतामूलक समाज निर्माणमा अझ्ै एउटा महत्वपूर्ण तगारो बाँकी छ । लैंगिक विभेदका धेरै खाडल पुरिंदै गए पनि, नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले अहिलेसम्मका सबै उपलब्धिलाई गिज्याइरहेको छ ।
मेरो छोरा र नातिले आफ्ना सन्तानलाई सीधै वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउन सक्छन् । तर, मेरी छोरी र नातिनीले त्यसो गर्न अझै सक्दैनन् । मेरी जेठी छोरीले गैरनेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी छिन्, नेपालमै रहेकोे भए त उनका छोरीहरू ‘अनागरिक’ नै हुनुपर्ने रहेछ । अब हाम्रा छोरी–नातिनीहरू बिचरा नबनुन् ।